Dowlada Turkiga oo heshay macluumaadka ay qoxooti Turki ah u sheegeen UDI-da Norway - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Dowlada Turkiga oo heshay macluumaadka ay qoxooti Turki ah u sheegeen UDI-da...
Dowlada Turkiga oo heshay macluumaadka ay qoxooti Turki ah u sheegeen UDI-da Norway
Tan iyo xagaagii 2016, markii uu fashilmay inqilaabkii ka dhacay dalka Turkiga, waxaa aad usoo batay qoxootiga Turkida ah ee magangalyada soo weydiisanayo Norway.
Turkida ugu badan ee qoxootinimada weydiista dowlada Norway, ayaa ah saraakiil, aqoonyahano iyo macalimiin lala xiriirinayo inay si uun xiriir ula leeyihiin kooxda wadaadka Fethullah Gülen oo dowlada Turkiga ay ku eedeysan agaasinka inqilaabka dhicisoobay. Norway ayaa magangalyo siiso inta ugu badan dadka kasoo baxsaday isku deyga inqilaabkii dhicisoobay ee Turkiga.
Caadi ahaan marka uu qofku magangalyo weydiisto Norway, waxaa laga qaadaa wareysi socdo saacado badan oo lagu weydiinayo macluumaadka noloshiisa iyo xogo kale oo dheeraad ah, si loo qiimeeyo baahidiisa magangalyo. Waxaana wareysiyadaas qaada hey´adda qoxootiga ee loo yaqaan UDI-da. UDI-da ayaa kadib adeegsata aqoonyahano iyo khuburo u dhashay dalka uu qofka kasoo baxsaday, si looga hubiyo in macluumaadka uu sheegay ay ahaayeen kuwo sax ah.
Wareysiyada UDI-da ayaa wargeyska Turkiga lagu daabacay:
Dowlada Turkiga ayaa sanadkii 2019 xabsiga dhigtay qareen asal ahaan Turki ah, balse la shaqeyn jiray dowladaha Yurub, si uu ugu xaqiijiyo macluumaadka dadka qoxootiga ah ee magangalyada weydiista dalalka Norway, Holland, iyo Sweden. Waxey booliska Turkigu baaritaan ku sameeyeen xafiiskii qareenkan, iyaga oo qaatay kartoonadii iyo maababkii ay ku jireen documentiyada dadka uu macluumaadkooda hayay.
Hey´adda qoxootiga ee UDI-da ayaa markii ay ka war heshay arrintaas fariin u gudbisay dadkii turkida ahaa ee magangalyada weydiistay Norway, waxeyna ku wargalisay inay dhacday arrin nasiib daro ah, taas oo sababi karto in qaar kamid ah xogihii iyo macluumaadkii ay UDI-da u sheegeen ay gacanta u gali karaan dowlada Turkiga oo ay markii horeba kasoo baxsadeen.
Turkiga ayaa qareenkan ku eedeeyay inuu ahaa jaajuus u shaqeeyo dalal shisheeye, kaas oo sanadkii malaayiin dollar ka sameeyo howlaha uu u qabto dowlado shisheeye.
Warbaahinta Turkiga ayaa kadib bilowday inay soo daabacdo qaar kamid ah xogihii ay bixiyeen dadkii iska dhiibay Norway ee laga helay xafiiska qareenka ay boolisku xireen. Waxaana xogaha ay warbaahintu faafisay kamid ah macluumaadka 41 qof oo Turki ah oo Norway magangalyo weydiistay.
Dadka ay arrintaas ku dhacday ayaa sheegay in magacoodii, noloshoodii iyo dhamaan macluumaadkii kale oo ay bixiyeen ay noqdeen kuwo public ah, arrintaasna aysan garaneyn sida ay ilaa hada ku dhacday.
Qaar kamid ah dadkan ayaa sheegay in kadib markii macluumaadkoodi la ogaaday, dhibaato la gaarsiiyay xubno katirsan qoysaskooda oo dowlada Turkiga kala kulmay colaad aad u weyn.
Isla qareenkan la xiray ayaa hayay macluumaadka 900 qof oo Turki ah oo Germany magangalyo weydiistay. Waxeyna arrintaas khilaaf diblomaasiyadeed ka dhex dhalisay dowladaha Germany iyo Turki, kadib markii macluumaadka dadkaas lagu soo daabacay warbaahinta Turkiga.
Xigasho/kilde: Norske asylintervju beslaglagt i tyrkisk razzia.
Previous articleQareen caan ah oo xalay Oslo lagu dilay: wiilkiisa oo ay boolisku xabsiga dhigeen.
Next articleTaiwan og Somaliland: To land som «ikke finnes» irriterer naboene